भरतपुर अपडेट : १,१८,८६८ मतगणना हुँदा कसले कति मत प्राप्त गरे ? | Ratopati
भरतपुर अपडेट : १,१८,८६८ मतगणना हुँदा कसले कति मत प्राप्त गरे ?
भरतपुर महानगरपालिकामा ११८८६८ मतगणना सकिएको छ । पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार सत्ता गठबन्धनको मेयरकी साझा उम्मेदवार माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले ४८११८ मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले ३६४३१ मत प्राप्त गरेका छन् । दाहालले ११,६८७ मतले अग्रता लिएकी छन् ।
यस्तै स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले १४४८२ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै काँग्रेसबाट उप मेयरका उम्मेदवार चित्रसेन अधिकारीले ४९,०३० मत प्राप्त गरेका छन् भने राप्रपाकी उम्मेदवार हिमला गुरुङले २८४९८ मत प्राप्त गरेकी छन्